Fehin-kibo fanamafisam-peo matevina-Impingement Freezer-Square Technology Group Co., Ltd.
Home>PRODUCTS>Fanamoriana vata fampangatsiahana
Ny vata fampangatsiahana tunnel dia ampiasaina voalohany indrindra hampangatsiaka ny vokatra sakafo, toy ny fofon-trondro, patsabe vita amin'ny hoditr'omby, angisy, dumpling, sns. Noho ny fomba fanapoahana rivotra azy, ny fantsom-panafody dia manasongadina fahombiazana mangatsiaka be sy karazana fampiharana amin'ny fikarakarana sakafo.
● Ny fehin-kibo conveyor dia manamboatra endrika làlan-drivotra boribory miaraka amina symmetrika mitsangana mba hanatsarana ny vokatry ny fifanakalozana hafanana.
●Ny faran'ny infeed sy ny outfeed dia misy fitaovana fampandehanana roa mba hisorohana amin'ny fomba mahomby ny fehikibo mpampita.
●Ny fantsom-panafody fantsom-pitaovana dia mampiasa tsipika famokarana voatahiry hatsiaka ho an'ny famokarana tontonana, izay miantoka ny fahombiazan'ny angovo avo lenta ary ny fahamendrehana sy ny kalitao miavaka.
●Ny vata fampangatsiahana tarika fampiroboroboana dia misy rafitra fanaraha-maso afovoany marani-tsaina, fitaovana detection automatique ary jiro fampitandremana, izay mora ho an'ireo mpampiasa miasa sy mitazona.
Ny halavan'ny fefy L 10M 14M 16M 18M 20M 22M 24M 26M
Fehin-kibo matevina Fehin'ny fehikibo 1500mm ， 1440mm ny sakany azo atao
Ny haavon'ny fantsona 30 ～ 70mm azo ovaina
Herinaratra napetraka 26kw 37kw 43kw 48kw 54kw 60kw 65kw 71kw
Qty. an'ny mpankafy 4 6 7 8 9 10 11 12
Hevitra ho an'ny hazan-dranomasina, pastry, hena voankazo ary sakafo voaomana.